Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Manohy ny sidina Torkia ireo mpitatitra fiaramanidina rosiana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao isan-karazany
Nanomboka tamin'ny talata 22 jona dia nanohy ny fifamoivoizana an-habakabaka i Russia sy i Turkey, izay voafetra tamin'ny tapaky ny volana aprily noho ny onjam-pivalanana vaovao any Torkia.
Mamerina ny serivisy fandefasana serivisy mpandeha ho any Torkia i Russia.
Afaka misidina mankany Istanbul, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum ny kaompaniam-pitaterana rosiana.
Nikasa hampiakatra ny fahita matetika amin'ny sidina manomboka indroa isan-kerinandro hatramin'ny sidina roa isan'andro ny mpitatitra saina Aeroflot Rosiana.
Nanambara androany ny masoivohon'ny federasiona misahana ny fitaterana an'habakabaka rosiana fa mpitatitra fiaramanidina Rosiana folo no nanohy ny sidina mpandeha an-tsambo voatondro ho any Torkia.
Nisy sidina 78, ao anatin'izany ny sidina sidina 54, kasaina hatao amin'ny andro voalohany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fifamoivoizana an-habakabaka eo anelanelan'ny Federasiona Rosiana sy ny Repoblikan'i Torkia.
Raha ny filazan'ny masoivohon'ny fitaterana an'habakabaka federaly, amin'izao fotoana izao dia orinasam-pitaterana rosiana 12 no manana fahazoan-dàlana hivezivezy any Torkia. Afaka manidina amin'ny tanàna Tiorka dimy izy ireo: Istanbul, Ankara, Antalya, Dalaman, Bodrum, regulator federaly. Ny zotram-piaramanidina dia afaka miasa sidina mankany Torkia avy amin'ny tanàna rosianina 32.
“Amin'ny 22 jona, sidina mahazatra sy charter miisa 78 no hiasa, ka ny sidina rosiana no hiasa 54. Aeroflot, Royal Flight, Smartavia, Azur air, Ikar, Yamal, Nord Wind, Pobeda, Red Wings, S7, Rossiya dia kasaina hisidina anio, ”hoy ny Federal Air Transport Agency.
12 ny mpitatitra fiaramanidina rosiana nahazo “permis 160 mahery ho an'ny mpandeha iraisampirenena sy / na fitaterana entana amin'ny tanàna fito any Torkia”, taorian'ny fanapahan-kevitry ny vaomiera misahana ny seranam-piaramanidina miditra amin'ny fitaterana an'habakabaka.
Nanomboka tamin'ny 25 Jona, mpitatitra saina Rosiana Aeroflot mikasa ny hampiakatra ny fahita matetika amin'ny sidina manomboka indroa isan-kerinandro ka hatramin'ny sidina roa isan'andro.
Ary manomboka amin'ny 25 Jona dia hanomboka sidina avy any Moskoa mankany Antalya, Dalaman ary Bodrum ny sidina nasionaly. Ankoatr'izay, Aeroflot dia tsy nanilika ny fitomboan'ny isan'ny sidina mankany Torkia, miankina amin'ny fangatahana sy ny enta-mavesatra.